DAAWO SAWIRRO: Shariif Sh. Axmed iyo Wafdigiisa oo ugu dambeyn goor-dhow gaaray Baledweyne | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Shariif Sh. Axmed iyo Wafdigiisa oo ugu dambeyn goor-dhow gaaray...
Baledweyne (Halqaran.com) – Waxaa goor-dhow magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gaaray, wafdigii uu hoggaaminayay guddoomiyaha xisbiga Madasha Qaran, Shariif Sheekh Axmed.
Shariif iyo Wafdigiisa ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif Ugaas Rooble ee magaalada Baledweyne, saacado kaddib markii maanta lagu xanibay Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Wararka ay haleyso Halqaran.com ayaa sheegaya in Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ay ku sigteen inay diyaaradda u diidaan in ay ka soo cago dhigato Garoonka Ugaas Khaliif ee magaalada Baledweyne.
Diyaaradan ayaa waxaa la sheegay in laga densaday raadeerada ku xiran Garoonka Ugaas Khaliif, iyadoo muddo kooban ay hawada ku hakatay, inkastoo markii dambe ka soo cago dhigatay Garoonka, xilli la sheegay inaanay jirin cid hageysay.
Waxaa muuqata in Villa Soomaaliya ay juhdi ku bixisay, sidii Siyaasiyiinta Xisbiyada Madasha Qaran uga joojin laheyd safarkooda Magaalada Baledweyne.
Waxaana arrintani sabab looga dhigay iyadoo maanta la qorsheynayay inay Magaalada Baledwyne gaaraan wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Xasan Cali Khayre.
Si kastaba ha ahaatee, siyaasiyiintan ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqay in laba boqol kun oo dollar ay ugu talagaleen dadka ay saameeyeen fatahaadaha Webiga Shabelle. Ujeedada ay maanta Baledweyne u tageyna ay la xiriirto, sidii ay xaaladda barakacayaasha u qiimayn lahaayen.
Garoonka Ugaas Khaliif ee Baledweyne
Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh